I-Romantic Spa Cottage kufuphi neendawo zokutyela & neecafe - I-Airbnb
I-Romantic Spa Cottage kufuphi neendawo zokutyela & neecafe
I-Ellie's Spa Cottage ikufutshane nazo zonke iikhefi ezithandekayo, iivenkile zokutyela, iivenkile, iigalari, ihotele kunye neelwandle, zonke ngaphakathi kwe-20 m - 500 m. Uya kuyithanda i-Spa Cottage enendawo esembindini kodwa yabucala, indawo yokuphumla, igumbi lokulala elinothando elinelinen entle. Ubunzulu, i-spa ye-hydrotherapy ye-massage ye-massage eneetawuli zodidi oluphezulu, iimveliso ezisemgangathweni zokuhlambela kunye neebhafi ezibonelelweyo. Ndikwaquka nesidlo sakusasa esinesisa, ubisi olutsha kunye neziqhamo, izibuko kunye neetshokolethi, kunye neendawo zokupaka zabucala ngaphandle kwesitrato.
I-Spa Cottage yi-45m sq kwaye ibonisa igumbi lokuhlambela elikhulu elinabantu aba-2 ubunzulu, i-double corner hydrotherapy massage spa. Iitawuli zodidi oluphezulu, izinto zangasese kunye neempahla zokuhlambela zibonelelwa. Kukho ikhitshi / indawo yokutyela kunye negumbi lokuhlala elinendawo yokulala yesikhumba. Igumbi lokulala elinothando linomqamelo webhedi ephezulu, iibhedi ezitofotofo ezibandakanya iSheridan sheet sheets kunye nemenyu yomqamelo. I-Spa Cottage ifudunyezwe kakuhle kwaye ine-air conditioner ejikelezayo. Ndibonelela ngokhetho lweeDVD kunye neencwadi zolonwabo lweendwendwe, kunye nesidlali seCD. Ndibonelela ngeNdwendwe yeeNdwendwe kwiindwendwe, ndidwelisa zonke iikhefi ezithandekayo, iivenkile zokutyela, iivenkile njl.njl, kunye neencwadana zazo zonke izinto onokuzibona kwaye uzenze ngaphakathi nakufutshane neStanley-ndiqinisekile ukuba uya kufuna ukuhlala iintsuku ezininzi ngokupheleleyo. bulela ubuhle beStanley kunye neendawo eziyingqongileyo. Ngexesha leenyanga zasehlotyeni, iitawuli zaselwandle nazo zibonelelwa.
IStanley yilali entle engaselwandle, imi kumgama oziikhilomitha ezisi-7 kulwandle olucacileyo, ijikelezwe ziilwandle ezicocekileyo. UStanley uqhayisa ngeendawo zokutyela eziphumelele iimbasa ezigqwesileyo kwimveliso yalapha ekhaya, iikhefi ezisemgangathweni kunye nebar lesidlo sakusasa, iivenkile ezizodwa kunye neegalari, izakhiwo zembali, ibala legalufa elisemngxunyeni eli-9 elwandle kwaye ngokuqinisekileyo umfanekiso wedolophu, "The Nut", i-monolith eyi-152 m ukuphakama. , ngokuphakanyiswa kwesitulo ukuya encotsheni kunika iimbono ezimangalisayo ngokupheleleyo. Indawo yezeMbali yaseHighfield kunye neendawo ezingqongileyo yeyona ndawo ikhethwayo kwimitshato emininzi, kwaye kukho iipenguin ezincinci zokujonga nje uhambo olufutshane ukusuka kwindawo yakho yokuhlala. Ilanga liyaphuma kwaye ilanga litshona kuyamangalisa.
Andihlali kule ndawo, nangona kunjalo ndihamba ngemizuzu nje embalwa ukusuka, ukuze iindwendwe zindifowunele okanye zindithumelele umyalezo ukuba zifuna naluphi na ulwazi olongezelelekileyo, uncedo, okanye nantoni na eyongezelelweyo ngexesha lokuhlala kwazo. Kuza kubakho isiqulatho seendwendwe esidwelisa zonke iikhefi ezithandekayo, iindawo zokutyela, iivenkile njl.njl (bonke uhambo olulula lwe-20m - 400m ukusuka kwindawo yokulala), kunye nentaphane yeencwadana zezinto onokuzibona nokwenza ngaphakathi nakufutshane neStanley.
Andihlali kule ndawo, nangona kunjalo ndihamba ngemizuzu nje embalwa ukusuka, ukuze iindwendwe zindifowunele okanye zindithumelele umyalezo ukuba zifuna naluphi na ulwazi olongezel…